Naya Bikalpa | » सरकारी निरिक्षणमा गएको टोली कसरी पुग्यो ताप्लेजुङ ? सरकारी निरिक्षणमा गएको टोली कसरी पुग्यो ताप्लेजुङ ? – Naya Bikalpa
सरकारी निरिक्षणमा गएको टोली कसरी पुग्यो ताप्लेजुङ ?
प्रकाशित मिती: २०७५ फाल्गुन २०, ०८: ५२: ०१
दासढुंगाको रहस्य गर्भमै तुहिरहँदाः फेरी हेलिकप्टर दुर्घटना
काठमाडौ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्रप्रसाद अधिकारी सहित सात जनाको ज्यान जाने गरी बुधबार ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटना थप रहस्यमय र शंकास्पद बन्दै गएको छ ।
मन्त्री अधिकारीसहितको सरकारी टोलीमा एकजना मात्र पर्यटन व्यवसायीलाई समावेस गराइएको छ । तेह्रथुमको चुहानडाँडामा विमानस्थल निर्माणको लागि सम्भाव्य अध्ययन गर्न जाने सरकारी टोलीमा सोही दिन फ्रान्स उड्ने तयारी गरेका पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पालाई किन समावेस गराइयो भन्ने बिषयले शंका उब्जाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मघर तेह्रथुमकै इवामा पर्छ । इवामा विमानस्थल बनाउन नसके पनि इवा नजिकको चुहानडाँडामा विमानस्थल निर्माण गर्ने इच्छा प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीलाई थियो । त्यसैले दुई बर्षअघिनै चुहानडाँडामा बिमानस्थल निर्माणको लागि पहल गरिएको थियो । आफ्नो जन्मघरसम्म जाने हवाई सेवा सञ्चालन गर्न सम्भावित अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निकै चासो र प्राथमिकता दिएको पाइएको छ ।
त्यसैले नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारीको साथमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विश्वास पात्रको रुपमा चिनिएका प्रधानमन्त्रीेको निजी सचिवालयका निजी सचिव युवराज दाहाललाई पनि सँगै पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर दमकको कार्यकारी अधिकृत हुँदा ओलीलाई निकै गुन लगाएका र दमकको बिकास निर्माणमा दत्तचित्त भएर खटिएका दाहाललाई मन्त्री अधिकारीसँगै चुहानडाँडा पठाउनु स्वभाविक थियो ।
तर, तेह्रथुमको चुहानडाँडामा विमानस्थल निर्माणको सम्भावनाको स्थलगत अध्ययन गर्न र स्थानीयसँग छलफल र सुझाव लिन गएको सो टोली किन एक्कासी ताप्लेजुङ गयो भन्ने कारणले निकै गम्भिर र शंकास्पद छ । डाइनेस्टी एयरलाइन्समा पाइलटबाहेक सामान्यतया ५ जना मात्र सवार हुन्छन । तर बुधबार क्याप्टेन प्रभाकर केसीले उडाएको डाइनेष्टी एयरलाइन्सको हेलिकोप्टनरमा क्याप्टनवाहेक नै ६ जना यात्रु थिए ।
पर्यटन मन्त्री अधिकारीका अंग रक्षक अर्जुनप्रसाद घिमिरे मन्त्री अधिकारीसँगै जानु तर उनका पीएसओ (पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर) विरेन्द्र प्रसादलाई सँगै लगिएको छैन् । डाइनेष्टी एयरलाइन्सको सिट चार्जमा नेपाल प्रहरीका नायव निरिक्षक विरेन्द्रप्रसादको नाम उल्लेख गरिएको छ । तर, भीआईपीको दबाबले पीएसओ बिना नै मन्त्रीलाई उडान भर्न कसले सल्लाह, सुझाव वा दबाब दियो भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
पीएसओको ठाउँमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिक निर्देशक धुर्व भोछिभोयलाई मन्त्री अधिकारीले किन लिएर गए ? त्यो पनि रहस्यमय छ । पर्यटन मन्त्री अधिकारीसँग तेह्रथम गृह जिल्ला भएका नेकपाका सांसद विजय सुब्बा पनि साथै जाने योजना थियो । तर, मन्त्री अधिकारीले हेलिकोप्टरमा सिट नभएको भन्दै कारण दर्शाएका थिए ।
आफ्ना सुरक्षा गार्ड र सम्बन्धित जिल्लाको सांसदलाई समेत नलिइ डाइनेस्टी हेलिकप्टर किन चुहान डाँडामा कार्यक्रम सकेर पाथिभरा गयो भन्ने रहस्य गहिरो हुनसक्ने आंकलन गरिँदैछ । चुहान डाँडामा खाना खाईसकेपछि मन्त्री अधिकारीको टोलीलाई कसको सल्लाह वा दबाबमा पाथिभरा दर्शनको लागि लग्यो भन्ने रहस्य खुल्न सकेको छैन ।
यहाँसम्मकी पाथीभरा मन्दिरको दर्शन गर्न हेलिकप्टर सहित मन्त्री आउँदै गरेको सूचना ताप्लेजुङस्थित सुकेटार विमानस्थलका इन्जिनियरहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यलयलाई सूचना दिनु परेको थियो । सुरक्षा निकायलाई कुनै जानकारी नै नदिइ हेलिकप्टर पाथीभरा आएको र साथमा नेपाल प्रहरीका सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) साथै नलानुलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले शंकास्पद मानिएको छ ।
हेलिकप्टरमा सवार यात्रु र आकस्मिक रुपमा पाथीभरा जाने कुरा जति शंकास्पद छ, त्यति नै मन्त्रीको टोलीले धेरै समय गुजारेको र मौसमको प्रतिकुलतालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । विगत ६ बर्षदेखि डाइनेष्टी एयरलाइन्सको हेलिकप्टर चलाउँदै आएका २६ बर्षिय पाइलट प्रभाकर केसीले माउण्टेन फ्लाईट र हिल साइडमा धेरै चुनौतिपूर्ण हवाई उडान सुरक्षित तवरले गरेका थिए ।
तर उनै पाईलट केसीले पाथीभरा जस्तो क्षणभरमा मौसम र जलवायू परिवर्तन हुने गाउँमा एक्कासी जाने, करिव डेड घण्टा होल्ड गर्ने र सुकेटार विमानस्थलको रुट नपकडी पश्चिमतर्फ ओरालोतर्फ हेलिकप्टर लगे भन्ने कारण खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
एकै घण्टामा पानी पर्ने, घाम लाग्ने र वादल लाग्ने ठाउँमा त्यसदिन बिहान हिउँसहित पानी परेको थियो । साँढे एघार बजे पाथीभरा क्षेत्रको मौसम खुलेको मौकामा त्यसतर्फ उडान भेरको हेलिकप्टर एक घण्टाभन्दा बढी सयमसम्म किन होल्ड गरेर राखियो वा राख्न लगाइयो भन्ने बिषय शंकाको घेरामा छ । विहीबार दिउँसो संसदमा सांसदसँग प्रश्नोत्तर सकेर बेलुकी जर्मन जाने योजना बनाएका मन्त्रीले बुधबार साँझ भने नेकपाका नेता योगेस भट्टराईसँग भेट गर्ने योजना बनाएका थिए ।
आजभन्दा एघार बर्षअघि २०६३ साल असोज ७ गते तत्कालिन बनमन्त्री गोपाल राई र योजनाबिद हर्क गुरुङसहित दुई दर्जनको ताप्लेजुङकै घुन्सामा दुर्घटनामा परेको थियो । क्षणभरमै पानी पर्ने, असिना पर्ने र हावाको बेग चल्ने पाथिभरा क्षेत्रको मौसमलाई आंकलन गर्न नसकेको देखिन्छ । हेलिकोप्टरका पाइलट केसीको पाथीभरा उडान दोश्रो पटक भनिएको छ ।
उनले हेलिकोप्टर पाथीभराबाट उडान भरेर फर्कने समय करिव साँढे एक बजे हिउँ परेकोेले उडान भर्न नसक्ने भन्दै सुकेटार विमानस्थल टावरलाई जानकारी दिएका थिए । तर, क्याप्टेन केसीले यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा किन हेलिकोप्टर चलाए भन्ने आशंका उब्जाएको छ । पाथीभराबाट सुकेटार विमानस्थलतर्फ नगई जोडले आएको हावा र हुण्डरीका कारण हेलिकप्टर पश्चिम दक्षिण मोहडातर्फ ओरालो लागेको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका थिए ।
हेलिकप्टरमा सवार भिआईपी, आफ्नै साहू, हवाई उड्डयन प्राधिकरणको हाकिमहरु र प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवको काठमाडौं फर्कनै पर्ने हतार छ भन्ने दबाबका सामुन्ने २६ बर्षीय क्याप्टेन केसीले उडान भर्न बाध्य भएको हुनसक्ने अड्कलबाजी पनि गरिएको छ ।
साधारण मध्यम परिवारमा जन्मिएका रविन्द्र अधिकारी सानैदेखि क्रियाशिल र जुझारु स्वभावका थिए । उनले पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पस पोखरा र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरको स्ववियू सभापति र अनेरास्ववियूको अध्यक्ष समेत भएका थिए । व्यापारी र धनाड्यहरुको बाहुल्यता रहेको काश्की र त्यसमा पनि पोखरा क्षेत्रबाट २०६४ सालमा उनले निर्वाचन जित्नु चानचुने कुरा थिएन ।
पछिल्लो समय उनको सक्रियतासँगै सफलता पनि चुलिँदै गएको थियो । आखिर दुर्घटना जुनसुकै कारणले भएपनि यसले मुलुकका होनाहार दक्ष र योग्य नागरिक गुमाउनु परेको छ । आगामी दिनमा नेपालमा हुने हवाई यात्रा असुरक्षबाट सुरक्षीततर्फ उन्मुख हुन सक्नेतर्फ सबैले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । मृतक सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा समवेदना ।
आङछिरिङको सम्वन्ध र सक्रियता
पाथीभरका पुजारीसँग लामो भलाकुसारी गरेका मन्त्री अधिकारीसहितको टोलीको उद्देश्य नै सुकेटारबाट पाथीभरासम्म केवलकार संचालन गर्ने बिषयमा स्थलगत अनुगमन र सुझाव लिनु थियो । सुकेटारबाट पाथीभरासम्म केवलकार चलाउने योजना सोही जिल्लाबाट संघीय संसदमा निर्वाचित सांसद तथा नेकपाका नेता योगेश भट्टराईको थियो ।
तर, जिल्लाका सांसद तथा आफ्ना मित्र योगेसको अनुपस्थितिमा त्यहाँ केबलकार संचालनको जिम्मा आफै लिएर पर्यटन विकासमा योगदान दिने भन्दै मौखिक प्रस्ताव गरेका आङछिरिङ शेर्पालाई लगिएको थियो । त्यतिमात्र होइन, शेर्पाले नेपालको हवाइ सुरक्षाको लागि अत्याधुनिक हवाई स्याटेलाईट उपकरण नेपालमा जडान गर्नको लागि फ्रान्सबाट खरिद गर्न खोजेको पाइन्छ । शेर्पा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको स्थापित प्रभावशाली व्यवसायी पनि हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भित्री सम्वन्ध उनले पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसम्म फैल्याउन सफल भएको पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् । उनले प्रधानमन्त्री ओली र पर्यटनमन्त्री अधिकारीसँगको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउने ताप्लेजुङमा केवुलकार र नेपालमा अत्याधुनिक स्याटेलाईट उपकरणको आपूर्ती आफै गर्न चाहन्थे भनेर जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री अधिकारीसँगको दरिलो र भित्री सम्वन्धबाटै शेर्पाले हिमालयन एयरलाइन्सले महिनौंदेखि जहाज ग्राउण्ड ह्यान्डलिंङ वापतको पैशा तिरेका छैनन् । सो शुल्क उनी मिनाहा गर्न चाहन्थे भनेर हवाई उड्डयन प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । हिमाल आरोहण गर्ने पर्यटकको भरियाजीवनबाट पाइलट हुँदै पर्यटन व्यवसायीको पहिचान बनाउन सफल शेर्पाको पछिल्लो सफलतालाई लिएर धेरैले रहस्यमय आम्दानी भन्दै अचम्म मान्दथे ।
तारा एयरलाइन्स र यति यएरलाइन्सका संस्थापक तथा प्रवन्ध निर्देशक रहेका उनी प्रथम सगरमाथा आरोही पासाङ ल्यामु शेर्पाका परिवारका सदस्यनै हुन् । उनका दुवै छोराहरु पाईलट छन् । उनका एक भाईको केही बर्षअघि उद्धारको क्रममा जहाज दुर्घटनामा निधन भएको थियो ।
कसले सम्हाल्ने आङछिरिङको १८ जहाज, ७ हेलिकप्टसहित २५ कम्पनी
ट्रेकिङ र हिमाल आरोहण गर्न आउने पर्यटकको भरिया (पोर्टर) पेशाबाट जीन्दगीको सफलताको यात्रा हात पारेका आङछिरिङ शेर्पा झण्डै २५ वटा प्राईभेट कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनको निधनपछि उनको यति धेरै कम्पनी कसले सम्हाल्छ भन्ने धेरैलाई लागेको होला । उनका दुइवटा छोरा पनि पाइलट छन् । उनको धेरै व्यापार र व्यवसायलाई उनका दाजु र भाईले पनि सम्हाल्दै आएका थिए । शेर्पाको अकस्मात निधन हुँदा उनका दुई छोराले सम्हाल्नुपर्ने २५ कम्पनीमा तीन वटा त एयरलाइन्ससँग सम्वन्धित छन् ।
ति एयरलाइन्सका २५ जहाजको जिम्मेवारी कसले सम्हाल्ने भन्ने अन्योलता पनि देखिएको छ । यि हुन शेर्पाले छोडेर गएका कम्पनी यति एयरलाइन्स, तारा एयरलाइन्स, अल्टिच्युट एयर, डाइनेष्टी एयर, हिमालयन एयर, थामशेर्कु ट्राभल्स, थामशेर्कु ट्रेकिङ, थामशेर्कु डेभलपर्स, यति होलिडेज, यति माउण्टेन होम, यति एडभेन्चर, व्लुसीप जर्निज, मुस्ताङ रिसोर्ट, इजि फ्लाई ट्राभल्स, डाँफे ट्राभल्स, केर एण्ड डाउनी रिसोर्ट, क्रियटिभ नेपाल, कोरा टुर्स, एडभेन्चर क्वेस्ट नेपाल, कसरा जंगल रिसोर्ट, नेपाल माउण्टेन लज, लुम्विनी होक्के होटल, गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट, ले शेर्पा होटल, ले शेर्पा रिसोर्ट, के–के मार्ट प्रालि. रहेका छन् ।
पाथीभरका पुजारीसँग लामो भलाकुसारी गरेका मन्त्री अधिकारीसहितको टोलीको उद्देश्य नै सुकेटारबाट पाथीभरासम्म केवलकार संचालन गर्ने बिषयमा स्थलगत अनुगमन र सुझाव लिनु थियो । सुकेटारबाट पाथीभरासम्म केवलकार चलाउने योजना सोही जिल्लाबाट संघीय संसदमा निर्वाचित सांसद तथा नेकपाका नेता योगेश भट्टराईको थियो । तर, जिल्लाका सांसद तथा आफ्ना मित्र योगेसको अनुपस्थितिमा त्यहाँ केबलकार संचालनको जिम्मा आफै लिएर पर्यटन विकासमा योगदान दिने भन्दै मौखिक प्रस्ताव गरेका आङछिरिङ शेर्पालाई लगिएको थियो ।
त्यतिमात्र होइन, शेर्पाले नेपालको हवाइ सुरक्षाको लागि अत्याधुनिक हवाई स्याटेलाईट उपकरण नेपालमा जडान गर्नको लागि फ्रान्सबाट खरिद गर्न खोजेको पाइन्छ । शेर्पा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको स्थापित प्रभावशाली व्यवसायी पनि हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री अधिकारीसँगको दरिलो र भित्री सम्वन्धबाटै शेर्पाले हिमालयन एयरलाइन्सले महिनौंदेखि जहाज ग्राउण्ड ह्यान्डलिंङ वापतको पैशा तिरेका छैनन् । सो शुल्क उनी मिनाहा गर्न चाहन्थे भनेर हवाई उड्डयन प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
हिमाल आरोहण गर्ने पर्यटकको भरियाजीवनबाट पाइलट हुँदै पर्यटन व्यवसायीको पहिचान बनाउन सफल शेर्पाको पछिल्लो सफलतालाई लिएर धेरैले रहस्यमय आम्दानी भन्दै अचम्म मान्दथे । तारा एयरलाइन्स र यति यएरलाइन्सका संस्थापक तथा प्रवन्ध निर्देशक रहेका उनी प्रथम सगरमाथा आरोही पासाङ ल्यामु शेर्पाका परिवारका सदस्यनै हुन् । उनका दुवै छोराहरु पाईलट छन् । उनका एक भाईको केही बर्षअघि उद्धारको क्रममा जहाज दुर्घटनामा निधन भएको थियो ।
ट्रेकिङ र हिमाल आरोहण गर्न आउने पर्यटकको भरिया (पोर्टर) पेशाबाट जीन्दगीको सफलताको यात्रा हात पारेका आङछिरिङ शेर्पा झण्डै २५ वटा प्राईभेट कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनको निधनपछि उनको यति धेरै कम्पनी कसले सम्हाल्छ भन्ने धेरैलाई लागेको होला । उनका दुइवटा छोरा पनि पाइलट छन् ।
उनको धेरै व्यापार र व्यवसायलाई उनका दाजु र भाईले पनि सम्हाल्दै आएका थिए । शेर्पाको अकस्मात निधन हुँदा उनका दुई छोराले सम्हाल्नुपर्ने २५ कम्पनीमा तीन वटा त एयरलाइन्ससँग सम्वन्धित छन् । ति एयरलाइन्सका २५ जहाजको जिम्मेवारी कसले सम्हाल्ने भन्ने अन्योलता पनि देखिएको छ ।
यि हुन शेर्पाले छोडेर गएका कम्पनी यति एयरलाइन्स, तारा एयरलाइन्स, अल्टिच्युट एयर, डाइनेष्टी एयर, हिमालयन एयर, थामशेर्कु ट्राभल्स, थामशेर्कु ट्रेकिङ, थामशेर्कु डेभलपर्स, यति होलिडेज, यति माउण्टेन होम, यति एडभेन्चर, व्लुसीप जर्निज, मुस्ताङ रिसोर्ट, इजि फ्लाई ट्राभल्स, डाँफे ट्राभल्स, केर एण्ड डाउनी रिसोर्ट, क्रियटिभ नेपाल, कोरा टुर्स, एडभेन्चर क्वेस्ट नेपाल, कसरा जंगल रिसोर्ट, नेपाल माउण्टेन लज, लुम्विनी होक्के होटल, गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट, ले शेर्पा होटल, ले शेर्पा रिसोर्ट, के–के मार्ट प्रालि. रहेका छन् ।
२०७५ फाल्गुन २०, ०८: ५२: ०१